ဆိုတေး ပြန်လည် သတိ ရနိုင် ချေရှိ | The FNG
ဆိုတေး ပြန်လည် သတိ ရနိုင် ချေရှိ
July 15, 2013 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
တောင်သာ မြို့ဖျော် ဖြေ ပွဲ သို့သွား သည့် ခရီးစဉ် တွင် ရန်ကုန် – မန္တလေး အဝေး ပြေး
လမ်းမ ၏ မိတ္ထီလာ မြို့မိုင်တိုင် ၂၉၁/၃ တွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက် မှု ကြောင့် မန္တလေး ဆေး
ရုံ ကြီး တွင် အတွင်း လူနာ အဖြစ် တက် ရောက် ကုသခံ နေရသည့် အဆိုတော် ဆိုတေး
သည် ပုံ မှန် နှလုံး ခုန် မှု ရှိ လာ ပြီး နာရီ့ အနည်း ငယ် ကြာ လျှင် သတိ ပြန်ရလာ နိုင်
သည် ဟု မန္တလေး ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော ခွဲစိတ်အထူးကုဌာန မှ အမည် မဖော် လို သည့်
ဆရာဝန် တစ်ဦး က FNG ကို ပြောသည်။
KIA အမျိုးအစား မော်တော် ကား မှောက် မှု ကြောင့် ကား ပေါ် တွင် လိုက် ပါ လာသူ သုံး
ဦး အနက် မချောချောသည် ယမန် နေ့ကွယ်လွန် သွား ခဲ့သည်။
အတွင်း လူနာ အဖြစ် တက် ရောက် ကုသ ခံ နေရသည့် ယာဉ်မောင်း ကိုသန်းဝင်းလှိုင် ကို
ရဲက မဆင် မခြင် မောင်း နှင် မှု ဖြင့် အမှု ဖွင့် အရေးယူထား သည်။
မြန်မာ အစိုးရ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၏ ပြော ရေး ဆို ခွင့် ရသူ ဦး ရဲထွဋ် က ရန်ကုန် – မန္တလေး
လမ်း သည် နိုင်ငံ တကာ အဆင့် မှီ လမ်း ဖြစ်သည် ဟု ပြော ဆို ခဲ့ သော် လည်း လစဉ် မော်
တော် ကား တိမ်းမှောက် မှု များ ကြောင့် လူ့အသက် ပေါင်း များ စွာ သေဆုံး ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
← ဇီမာမန်း ကို အပြစ် မရှိ ကြောင်း ဆုံး ဖြတ် ပြီး နောက် အမေရိကန် မြို့ကြီး တွေ မှာ ဆန္ဒပြ မှု တွေ ပေါ်ပေါက်
ဘင်္ဂလားဒေရှ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ကို ထောင်ဒဏ် နှစ် ၉၀ ချမှတ် →
45 responses to “ဆိုတေး ပြန်လည် သတိ ရနိုင် ချေရှိ”
ရာရာ September 26, 2013 at 11:17 am · ·
အဝေးပြေးလမ်းမကို ပြန်ပြီပြုပြင်သင့်တယ်လို့မထင်ဘူးလာ လူတော်တော်များလဲသေကုန်ကြပြီ လမ်းက ကွန်ကရစ်လမ်းလည်းဖြစ်မောင်းလို့လဲကောင်းတော့အ ရှိန်းကမြန်လာတယ်ကွန်ကရစ်လမ်းဆိုတော့ကားတာယာကဘယ်ခံနိူင်မလဲ ပေါက်တော့တာဘဲမဟုတ်ဘူး လားလမ်းကို ကတ်သယာ ပြန်ပြောင်းသင့်တယ်လို့ထင်တယ်နော် ဒါကလဲမြင်တာကိုပြောတာပါ
Aung Phyo July 29, 2013 at 10:59 am · ·
balagyi July 26, 2013 at 3:51 am · ·
​အောင်​​ဌေး July 25, 2013 at 6:41 pm · ·
ဇူလှိုင်ဖြိုး July 24, 2013 at 2:02 pm · ·
ကိုဆိုတေးနေကောင်းပါစေ အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်ပါ
Soemin Min July 24, 2013 at 1:23 pm · ·
nyein nyein moe July 24, 2013 at 1:12 pm · ·
khaw ram July 24, 2013 at 10:49 am · ·
khaw ram July 24, 2013 at 10:48 am · ·
ဆိုတေး အမြန်ပြန်နေကောင်းရမယ်နော် အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးလျှက်
ကျော်စည်သူ July 23, 2013 at 10:58 pm · ·
ayepwint July 23, 2013 at 8:36 pm · ·
Tiger July 23, 2013 at 12:20 am · ·
ကိုဆိုတေး ခင်ဗျားဘဝမှာ မိန်းမရှုပ်တယိဆိုတဲ့ အမဲစက်ကြီးထင် သွားပြီ။ ခင်ဗျားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဆိုရင် သေသွားတဲ့မချောချောဆိုတဲ့ခင်ဗျားရဲ့ချစ်ဇနီးလားမချစ်တဲ့ဇနီးလား သူ့ကိုတော့စာနာပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးချက်တင့်တယ်။ကျွန်တော်က ဝေပံပေးပါ။ကျန်းမာပါစေဖြစ်ချင်သောဆန္ဒတွေလဲပြည့်ပါစေ။
ခြူးဝတ်ရည်မျိုး July 22, 2013 at 9:09 am · ·
pinlalzinyaw July 21, 2013 at 9:27 am · ·
ကို ဆိုတေးမှာမိန်မရှီတယ်ဟုတ်လား ရှီလို့ရှီမှန်မသိဘူး ကျွန်တော်ကလူပျိုထင်နေတာ
newhpaw July 21, 2013 at 8:37 am · ·
ချစ်ခိုင်လေး July 20, 2013 at 8:25 pm · ·
yeyinaung July 19, 2013 at 8:21 pm · ·
အိုစိတ်မကောင်းလိုက်တာဆိုတေးရဲ့ ချစ်ဇနီးလေးချောချောကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေ……..ကျွန်တော်ရဲရင့် အောင်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်
yeyinaung July 19, 2013 at 8:18 pm · ·
Tiger July 19, 2013 at 6:16 pm · ·
မေမြတ်နိုးဝေ July 19, 2013 at 2:36 pm · ·
monmon July 18, 2013 at 3:07 pm · ·
မျိုးသီရိမောင် July 18, 2013 at 1:21 pm · ·
pyaephyooo July 18, 2013 at 10:42 am · ·
hanhtooaung July 17, 2013 at 9:48 pm · ·
zinmarhtwe July 17, 2013 at 7:23 pm · ·
star July 17, 2013 at 3:10 pm · ·
star July 17, 2013 at 2:59 pm · ·
thetmaungmaung July 17, 2013 at 11:30 am · ·
ညီလေး ဆိုတေး မြန်မြန်နေကောင်းလာပါစေ မြန်မြန်သတိရလာပါစေ နောက်တစ်ခါလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံရပါစေနဲ့ လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် ညီလေး
snowwhite July 17, 2013 at 8:51 am · ·
snowwhite July 17, 2013 at 8:49 am · ·
Ko gyi July 17, 2013 at 5:33 am · ·
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ၁၂၀ မောင်းလာတာ သူတို့ ကားကကျော်တက်သွားပြီး ဖြစ်တာဆိုတော့၊ကျော်တက်တဲ့အရှိန်ကများတယ်တဲ့ ၊
မသိန်သိန်းထွေ July 16, 2013 at 10:04 pm · ·
Lutt latt moe July 16, 2013 at 9:51 pm · ·
naw grace July 16, 2013 at 9:43 pm · ·
kyawt July 16, 2013 at 6:21 pm · ·
ကိုဆိုတေးအမြန်ဆုံးနေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်….ကိုဆိုတေးရဲ့ ဇနီးမချောချောအတွက်လဲအရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် …….သီချင်းတွေ့ ပြန်လည်သီဆိုနိုင်ပါစေ …..
ဦးကျော်လွင် July 16, 2013 at 4:40 pm · ·
၂-မော်တော်ယာဉ် (ပိုင်iရှင်ရှိသည်။ ပိုင်ရှင်က သူ့ကား စုတ်သွားမှာကြောက်သည်။)
မည်သူသေသေသောအခါ ထိုလမ်းကို ပြုပြင်ကြ
မည်နည်း။ ထိုသူသေ သည်အထိ စောင့်ရပါ
Than Nyunt July 16, 2013 at 6:54 am · ·
လမ်းကိုအပြစ်ပြောနေကြတာထက်၊ အသုံးပြုသူက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ သတ်မှတ်တဲ့ ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အရှိန်နဲ့မောင်းပါ။ ကားကိုမသွားခင်မှာ ဂရုစိုက် စစ်ဆေးပါ။ ယာဉ်မမောင်းခင်ညမှာ ကောင်းကောင်းအနားယူအိပ်စက်ပါ။
ကျွန်တော်တော့ အရင်လမ်းဟောင်းထက် ပိုကြိုက်ပါတယ်။ အချိန်အများကြီးသက်သာသွားတယ်။ သူများနိုင်ငံက လမ်းတွေ ကောင်းတာတော့ ကောင်းတာပေါ့။ သည်လမ်းရဲ့ လစဉ်တိုးတက်မှုတွေလဲ အမြဲတွေ့နေရပါတယ်။ ကတ္တရာ ခင်းလာပြီ။ သတိပေးအမှတ်သားတွေ ပိုကောင်းလာတယ်။ လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ကားတစီး ကျွန်တော့ကားကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြတ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်က ၉၅ kmph လောက် မောင်းနေတာပါ။ ကျွန်တော့ဘေးက မိတ်ဆွေကိုတောင် မြန်လိုက်တာ ဘာအရေးကြီးနေလို့ ပါလိမ့်လို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။
Accident တခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒရိုင်ဘာကြောင့်က ၇၅% ထက်မနည်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
လမ်းကိုအသုံးပြုနေသူများ သတိရှိ၊ ဘေးကင်းကြပါစေ။
nailg mintun July 17, 2013 at 7:32 am · ·
ကြောင်းပြ ကြတယ်ဘာလို့ လဲဆိုတော့
ဖြစ် တာပဲ ကျွန်တော်လဲသူများတွေလောက်
ပြေတယ်ဗျ နောက် တစ်ခု ကပိုဆိုးတယ်
ပဲနေပမလားဗျာ ။ ဘာပဲပြောပြောကိုဆိုတေး
ကြပါစေ့့့့့့ 
ngelayy July 23, 2013 at 4:31 pm · ·
ဘယ်​​လောက်​​တောင်​သိ​နေလို့လဲ လမ်း​ကောင်းတယ်​ဆိုတာ ​သေချာတာတခုက​တော့ဒီလမ်းသစ်​ကိုအ​ကောင်းဆုံးအင်​ဂျင်​နီယာ​တွေကစစ်​​ဆေးသင့်​ပြီ ထင်​တယ်​။နင်​တ​ယောက်​ဘဲ​ကောင်း​နေတာ
tinoh July 23, 2013 at 6:08 pm · ·
You are right bro……most of mother fucking private drivers in Myanmar are so stupid; Sons of rich bitches need to learn how to drive safely.
heinyazar July 15, 2013 at 7:35 pm · ·
ရွက် သင့်ပါသည်။ ယာဉ်မောင်းများလည်းသတ်မှတ်သည့် မိုင်နှုန်းနှင့်သာ မောင်းသင့်ကြောင်း
jojoe July 15, 2013 at 7:09 pm · ·
nay myo July 15, 2013 at 5:37 pm · ·
thiri, thae su , hla hla soe, nandar, thwin min July 15, 2013 at 4:30 pm · ·
ဇင်မျိုး July 22, 2013 at 12:26 am · ·